Réponses pour «ihany»:
Total: 80 résultats - 0.02 secondes
100% - NY TENY ARABO (BOKY VOALOHANY)
Azo tadiavina ao ihany koa ny “fichier pdf”-ny lesona.
99% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016
034 01 092 93 Taona faha-16 2001-2016 VOLANA MASINA RAMADANY Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.
99% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY
034 01 092 93 Taona faha-18 2001-2018 VOLANA MASINA RAMADANY Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.
98% - LESONA 1
Saingy tsy omena anareo indray mandeha avokoa ireo hanamora ny fandraisanareo azy fa ireo izay ilaintsika amin’ny lesona ihany no ianrantsika.
97% - SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO
97% - SpécialementPourToiN°51
Koa mazotoa ary mitombo amin’ny alalan’ireny programa maro atao isaky ny RG ireny.Mazotoa ihany koa amin’ny fanompoana indrindra eo amin’ny fitarihana “étude biblique” .
96% - LESONA 2
Fa raha tsy misy litera intsony kosa ao aoriany dia mijanona amin’ny endriny ihany izy.
96% - fitantanambola FIFATO
Ny Mpitahiry vola (trésorier) irery ihany no mitahiry ny volan’ny fikambanana FIFATO.
95% - KORBATANE 5 version 2015
KORBATANE 5 version 2015 Page 1@25 Korbatane 5 version 2015 taona faha-15 (2001 – 2015) KORBATANE ILALLAH N° 5 taona faha 15 (2001 – 2015) Ny volana masina SHA’ABANY Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.
95% - SpécialementPourToiN53
Ar 400 Un périple qui en vaut la peine 3 Izahay samy hafa 7 Si seulement tu savais … 4 Isika ihany io e !
94% - TADY LAHARANA 187
Narivo aok’izany ny ranomaso raha nihira ny “Avia, ry mino” sy ny “Mifankatiava ihany”.
92% - FITSIPIKA TOSIK'ART
Olona iray ihany anefa no tompon'andraikitry ny tetikasa tokony ho voasoratra ao anatin’ny antontan-taratasin’ny mpifaninana.
92% - KORBATANE 5 version 2016 colour
Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.
91% - KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY
90% - Gazety fevrier 2019
11a) Ny fahasoavana no mahatonga ny Fiangonana tia ny fiarahamonina iasany, tia ny mpanota fa tsy ny hitsara azy, ny hampahatsiaro azy fa ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany no tena fanadiovana marina sy ny fiainam-pifaliana tena izy sady maharitra.
88% - AMBOHIBAO 17 nov 2012
RAKOTOARIVONY Stéphenson 2 Jesosy koa no ambara, araka ny T.1.1 io ihany, izay manana hevitra roa, izay manao hoe:
87% - Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana
Azo ambara àry fa be dia be ny fomba ahazoana mikolokolo an’ io saintsika io na ny marimarina kokoa momba izay hampitomboana ny fahazoana mitadidy mba hanapoitra vokatsoa toy ny eo amin’ ny fianarana ohatra.Izay tena avoitrantsika eto dia ireo dingana amin’ ny fikarakaràna ny ara-tsaina ho amin’ izany sy ny fampahavitrihana ny ara-batana ihany koa izay tsy afaka hosarahina amin’ ny fampivoarana ny tenan’ olombelona.
86% - Article GBUT n°02 2014
» aoka ho fantatry ny olona fa « manana an’i Jesoa tokoa isika » ary aoka tsy ho adinoina fa ny firahalahiantsika dia fiarovana ho antsika mba hijoro tsara ka tsy ho lavo, ary ny Tompo aza dia mampianatra antsika ihany koa mba hampahery ny reraka, hanarina ny lavo amin’ny fanetre-tena.
85% - Bulletin Mensuel Tresor N37
85% - Article GBUT 2014
Na ny hafanam-po hivavaka aza dia tsy tonga ho azy avy amin’ny fahazarana fotsiny ihany, fa ao amin’ny fiambenana sy ny fahononantena kosa araka ny 1 Pet 4.7.
85% - Final
Tsy vavaka ho an’ny Apostoly 12 ihany akory ity vavaka ity, fa vavaka ho an’ny mpianatr’i Jesoa rehetra, izany hoe, vavak’i Jesoa ho an’ny Fiangonana.
85% - FANARENANA
Tsy ny ady sy fampiasan-kery ihany anefa no niteraka fandaminana vaovao tamin’izany andalan-tantara izany fa teo koa ny fe-pihavanana samihafa, ny fifanakalozam-pahalalana na koa ny fifanambadiana.
85% - GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES PROJET INCIPALS
Mifanindran-dalana amin’izany ihany koa ireo lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety, izay manery ny mpikirakira vaovao hanaja fitsipi-pitondran-tena ka ahitana ireo izay tsy tokony hataon’izy ireo eo am-panatanterahana ny asany.
83% - DEPLIANT RAJABO 2018
ALLAHOUMMA-GHFIR LIL MOUWMININA WAL MOUWMINAAT izay tokony hatao matetika sy betsaka ihany koa mandritra an’ity volana.